Shina maoderina fanasan-damba amin'ny seramika seraika roa sy ny mpamatsy | Belle
trano fandroana seramika maoderina iray fidiovana roa
Warranty: 3 taona Takelaka buffer Cover: ENY
Mifangaro. Pit Spacing: 180mm Flushing Flowrate: 3/6L
Flushing Button Type: Karazana roa faran'izay manindry ambony Serivisy aorian'ny fivarotana: Hafa
Lanja: 51-60KG Fahafahana vahaolana amin'ny tetikasa: Ny hafa
Fampiharana: Hotely Style Design: ANKEHITRINY
Toerana niandohana: Shina Anaran'ny marika: Belle
Fitaovana: tanimanga Firafitra: Singa iray
Fametrahana karazana: Gorodona napetraka Endri-javatra: Tondra miafina
Drainage: P-fandrika, S-fandrika Fomba famafana: Gravity Flushing
Toilet Bowl Shape: manodidina Style: lafo vidy
fitaovana: tanimanga habe: 720 * 370 * 770mm
loko: fotsy na hafa fametrahana: gorodona nitaingina
Fomba fanosehana: fanasan-damba Cover fonenana: PP / UF
MOQ: 20sets Fonosana: Baoritra 5-ply
Karda fanondranana 5-ply
Ahoana no hametrahana irery ny trano fidiovana?
Raha ny marina, ny fametrahana ny kabine dia tsy dia sarotra loatra. Betsaka ny olona hisafidy ny hividy sy hametraka azy irery, koa ahoana no fomba hampiasana azy? Aleo lazaina tsotra fotsiny.
Manasa lamba, sns
1 、 Zahao ny haavon'ny fantsom-pako sy ny tany
Ilaina ny manamarina raha misy ny fanakanana ny antsanga, ny taratasy fako ary ny sundries hafa ao amin'ny fantsom-pako. Mandritra izany fotoana izany dia ilaina ihany koa ny manamarina raha napetraka eo anoloana, any aoriana, havia sy havanan'ny tany ny trano fidiovana. Raha tsy mitovy izy io dia mila asiana level.
2, farito ny marika afovoan'ny fantsom-panafihana
Hamafiso ny afovoan'ny fantson-drano maloto. Ny fomba dia tsotra dia tsotra, izany hoe, avadiho ny fidiovana, ary avy eo manorata tsipika afovoan-tanana eo afovoan'ny fantsona fidiovana ao amin'ny trano fidiovana. Mariho fa ny tsipika afovoany ambany dia tokony hipaka hatrany amin'ny faran'ny trano fidiovana sy ny tongotra manodidina.
Ampifanaraho aloha ny fidiovana amin'ny tsipika fiakarana ny fantson'ny rano maloto mba hahazoana antoka fa apetraka mitsivalana ny trano fidiovana, ary avy eo tsindrio mafy ilay peratra famehezana. Ny dingana manaraka dia ny fametrahana ny visy vatofantsika sy satroka haingon-trano handaminana ny fidiovana.
4, tombo-kase ambany
Aorian'ny fanamboarana ny trano fidiovana dia ilaina ny mametraka peratra famehezana manokana amin'ny fantsom-pako, na asiana boribory lakaoly fitaratra (putty) na simenitra simenitra manodidina azy. Soso-kevitra fa ny tahan'ny simenitra amin'ny fasika dia 1: 3.
5 、 Fametrahana kojakoja fitoeran-drano
Araraka amin'ny rano mandritra ny 3-5 minitra ny fantsona. Alohan'ny hiantohana ny fahadiovan'ny rano amin'ny paompy dia apetaho ny valva zoro ary ampifandraiso ny fantsom-pifandraisana, ary ampifandraiso ireo fantsom-panafody amin'ireo kojakoja fantson-drano napetraka.
6 inspection Fanaraha-maso ny vaomiera
Ny dingana farany dia ny fizahana ny trano fidiovana, hamaritana raha malefaka ny toerana fametrahana ny valizy, na ara-dalàna ny valizy miditra sy ny tombo-kase, ary raha misy ny fametahana sy ny fivoahana. Tandremo sao ny valizy miditra dia misy fitaovana fanivanana. Raha tsy izany dia asaina apetrakao.
Teo aloha: 2021 fivarotana mafana amin'ny toeram-pisakafoanana any ivelany Whirlpool lomano lomano dobo fandroana Spa
Manaraka: Sehatra fotsy madio no mitete amin'ny famafana plastika fanasana fantsom-boaloboka 600mm
Kilgore Toilet Factory
Toilet Factory Factory
Toileta miaraka amin'ny koveta fandroana
Fitaovana fandroana acrylic square madio fotsy fandroana ...